Barlamaanka oo Su’aalo weydiiyay wasiirka Cadaaladda – Radio Muqdisho
Barlamaanka oo Su’aalo weydiiyay wasiirka Cadaaladda
kulanka Barlamaanka Soomaaliya oo shir gudoominayey afhayeenka golaha shacabka Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari “ayaa waxaa hor yimid wasiirka cadaaladda Xukumadda Soomaaliya si uu ugu warbixiyo dhismaha gudiga madax-banan ee Adeegga Garsoorka oo ay dhawaan meel mariyen golaha wasiiradda Xukumadda Soomaaliya.
Wasiirka cadaaladda Xukumadda Soomaaliya Mudane Cabdulahi Axmed Jamac (Ilka-jiir) ayaa ka codsaday golaha Barlamaanka Soomaaliya in ay mel mariyaan gudigaasi si ay u soo dhisaan maxkamadda dastuuriga ah.
Intaa ka dib ayey mudanasha Barlamaanka waxaay ugu gudagaleen su’uulo laxiirka dhismaha guddiga madax banan ee adegga garsoonka dalka oo ay waydiinayeen wasiirka cadaaladda.
Mudane Cabdullaahi Axmed Jaamac (Ilka jiir) wasiirka Cadaaladda ayaa ka jawaabay guud ahan su’aalihii ay waydiyeen xildhibaanadu.
Maanlinta birito ah ayaa lagu wada in uu Barlamanaka horyimaado wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya mudane Cabdirahmaan Maxamed Xuseen “Odawaa” uu kaga warbiyo isla markaana su’aallo looga waydiiyo dhismaha labadda Gudi eek ala ah guddiga madax -banan doorashooyinbka qaranka iyo kan xadduudaha iyo federaalka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan oo kulanka soo xirey kulanka ayaa gudiga garsoorka ee Barlamaanka faray in ay isku laabtaan ayaga iyo wasaaradda isla markaana golaha u soo gudbiyaan warbixinadooda la xiriira arimaha maanta laga hadlay.
Danjiraha Shiinaha ee Soomaaliya oo deeq gaarsiiyay carruur agoon ah-Sawirro
Deegaanka Ceel-Dibir oo laga sameeyay howlgal bilic soo celin ah